Home Wararka Madaxweyne Deni oo lagu wado in uu magacaabo wasiiro cusub
Madaxweyne Deni oo lagu wado in uu magacaabo wasiiro cusub
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu Todobaadkan magacaabo Wasiiro, Agaasimayaal, Guddoomiyaal iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa la filaya in uu isla Todobaadkan safar siyaasadeed ugu baxo dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta.Todobaadkii hore, Madaxweyne Deni ayaa qoray warqad uu ku magacaabay Hoggaanka sare ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida iyo danbiyada culus, inkastoo uusan weli shaacin.
Ujeedada magacaabistaan ayaa la xiriirta inuu Saciid Deni magacaabo gole wasiiro oo inta uu ku maqan yahay ololaha doorashada Federaalka oo uu doonayo inay u maamulaan Puntland una hayaan Puntland.
Previous articleBeesha Caalamka oo war kasoo saartay doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo afhayeenada labada aqal
Next articleMadaxweynaha Jubbaland oo kulan la qaatay safiirada dalalka Midowga Yurub
Munaasabad xil wareejin oo loo sameeyay Gud. Baarlamaanka Hirshabeelle